Shiinaha AISI52100 kubbadaha birta / chrome steel Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Kangda
Magaca Product: Dhalista kubad bir ah / kubad bir ah oo bir ah / Kubadda birta ah ee dhalista
Halabuurka kiimikada ee AISI52100 kubadaha birta qaada（GCr15 / SUJ2 / 100Cr6）
Si 0.15% -0.35%
Mo 0.1% max
Qaadista birtu waxay leedahay culeys sarreeya, xoog silig ah, taabasho xoog daal iyo xirashada iska caabin, iyo adkeyn badan, oo buuxisa shuruudaha iska caabinta daxalka iyo u adkeysiga heerkulka sare xaaladaha qaarkood.
Kaarboonka chromium-ka sare ee birta qaata wuxuu leeyahay kaarboon badan oo kaarboon ah (0.95-1.05%), qallafsanaan sare iyo mid isku mid ah ayaa la heli karaa ka dib daminta, iyo nolol daal dheer. Faa'iido darrada ayaa ah inay xoogaa u adkaysanayso culeysyada waaweyn iyo saameynta adkaanta.
Birta dhalista kaarboon-koronto-sare ee birta ah ayaa inta badan loo isticmaalaa sidii siddooyinkii iyo waxyaabihii is-rog-rogayay ee meelihii is-rogay ee ku xirnaa xaaladaha guud ee isticmaalka.
Qaadashada kubbadaha birta ah, oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah dhalista, ayaa door aad u muhiim ah leh.
Sidaa darteed, saameynta isticmaalka iyo nolosha adeegga ee culeysku waxay si dhow ula xiriiraan saxnaanta iyo adkaanta kubbadda birta dhalista. Adag ee kubbadda birta sidata waxay la xiriirtaa qiimaha rarka burburin kara ee birta birta ah.
DALKA HEERKA MAGACA MAADI
SHIINAHA GB GCr15
Muuqaalka ugu weyn ee kubbada birta xambaaraysaa waa adaygtiisa sare iyo iska caabbinta. Markaa waxaan u baahanahay in si isdaba joog ah loogu soo bandhigo qiimaha adkaanta kubbadda birta. Baaxadda qiimaha adkaanta ee kubbadda biraha la dhammeeyay ayaa lagu qeexay heerka qaran ee kubbadda birta GB / T 308.1-2013.
30MM-50MM, HRC = 59-64;
Ka dib saxitaanka dhaqida, saliida & kahor intaadan xirxirin kubadaha muunada laga soo qaaday dufcadan waxaa loo diraa xisaab hubinta ugu dambeysa si loo hubiyo culeyska dusha sare, wareega, waji ahaanta, kala duwanaanshaha cabirka badan iyo adkaanta shaybaar casri ah, sida ku xusan qorshooyinka xakamaynta iyo nidaamka xisaabinta dekedda. Marka dhammaan shuruudaha la buuxiyo, shahaadada imtixaanka ayaa markaa loo diyaariyaa macmiilka. Sheybaaradeena casriga waxay ku qalabeysan tahay saxnaan sare, makiinado iyo qalab caalami ah oo la ixtiraamo waxaana maamula shaqaale si fiican u tababaran oo tayo leh.
Hore: Kubbada dhalada
Xiga: Kubadaha birta AISI1015
Aisi52100 Qaadista Kubadaha Birta ah
Aisi52100 G10 Dhalista Kubadaha Biraha
G10 Aisi52100 Qaadista Kubadaha Birta ah